Itoobiya oo Guuldaraysatay iyo Nigeria oo bar baro lugu qabtay | Warfaafiye
Warfaafiye Arrimaha Bulashada	Itoobiya oo Guuldaraysatay iyo Nigeria oo bar baro lugu qabtay
(Sports News) Waxaa guul daro dhabrka loo saaray xulka Dalka Itoobiya kulan ka tirsanaa Koobka Qaramada Africa kidib markii Xulka Burakina Fasto iskaga horyimaadeen Gurubka C kulan ka tirsanaa .
Ciyaar xiisa badan oo ku dhaxmartay garoonka mambela ayaa labada xul waxaa guul wayn gaaray inta taariikhda la xasuusto dalka Burakina fasto kaa oo 4_0 dhabarka u saaray Xulka Itoobiya .
Xulka Itoobiya ayaa qaybtii hore ee ciyaarta waxaa ka dhawaacmay laba ciyaartooy oo muhiim ahaa waxaana labada ciyaartooy oo kala ahaa Xiddigii goolkii bar barada Zambia u dhaliyay Andy Girma iyo Asirat .
Xilka Burakina fasto ayaa kaarka casaankaa laga siiyay Gool hayahooda laakiin waxaa ay ciyaartooda sii kululaatay markii kaarkaa laga siiyaya Gool hayaha waxana goolashaa badan ka saaciday Alen torer oo ah nin ka ciyaara Qaarda Yurub.
Xulka Dalka Nageria aya bar baro lugu qabtay Kulan isla ciyaaren Xulka Zambia waxana gool soo daahay la yimid Zambia kaa oo aha rikoore ama darbada xorta ah waxa loo yaqaano oo u dhaliyay Gool hayahooda .
W/Q/Cabdi raxman ilkacase